के तपाई हात फाट्ने समस्याले पीडित हुनुहुन्छ ? यस्ता छन्, घरेलू प्रभावकारी उपाय – Etajakhabar
के तपाई हात फाट्ने समस्याले पीडित हुनुहुन्छ ? यस्ता छन्, घरेलू प्रभावकारी उपाय
ताजा खबर :- अनुहारको त्वचाको उचित हेरचाहको साथै शरीरको अन्य भागको हेरचाह गर्न पनि निकै आवश्यक हुन्छ । सुन्दरता कायम राख्न शरीरको सबै अंगले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ । मौसममा अचानक परिवर्तन या पानीमा लगातार काम गर्नाले हात रुखो र मृत हुन्छ, जसको कारण हातको त्वचा फाट्ने समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।
यस्तो समस्या लगभग तपाईले हरेक मौसममा देख्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाई पनि आफ्नो हातको समस्यालाई वेवास्ता गर्नुहुन्छ भने पछि गएर भयानक रुप लिन सक्छ । यदि तपाई आफ्नो हात फाट्ने समस्याबाट बँच्न चाहनुहुन्छ भने राम्रो किसिमको मोइस्चराइजर क्रिमको उपयोग दिनहुँ काम पुरा गरिसकेपछि गर्न सक्नुहुन्छ ।
दिनमा हामी पटक-पटक आफ्नो हात धुने गर्छौँ, जसका कारण हातको त्वचा रुखो हुनथाल्छ । यसकारण हातको त्वचा फाट्ने र उचित हेरचाह नहुँदा हातको चमक नष्ट हुनथाल्छ । हातको यहि समस्याबाट बँच्नको लागि आज हामी हात फाट्ने समस्या हुँदा अपनाउनु पर्ने उपायको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ ।
मोइस्चराइजरको उपयोग नियमित रूपले गर्नुहोस् । यसको प्रयोग गर्नाले हातको रूखोपन कम हुन्छ र साथै फाटेको त्वचामा नरमपन प्राप्त हुन्छ ।
प्राकृतिक उत्पादनको उपयोग
आफ्नो हातमा रासायनिक तत्वहरूले बनेको उत्पादनको साटो प्राकृतिक उत्पादनको उपयोग अधिक मात्रामा गर्नुहोस् । हर्बल साबुन, बदाम सोप, एलोभेरा या ओलिभ ओयलले मिलेर बनेको पदार्थको मात्रा युक्त उत्पादनको प्रयोग गर्नुहोस् । जसको कारण हातमा नरमपन बनिरहन्छ र हातको रुखो हुनबाट पनि बचाउँछ ।
जब हामी कपडा वा भाँडा धुन्छौँ तब प्रायजसो हातको नरमपन नष्ट हुन्छ, जसको कारण हात फाट्ने कारण बन्छ । यस्तो समस्याबाट बँच्नको लागि हातमा एक्सफोलिएटको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
हात फाट्ने समस्याबात बँच्नको लागि कागतीको साथमा ग्लिसरीन र गुलाबजल मिलाएर एक प्याक तयार गर्नुहोस् । यस प्याकलाई फ्रिजमा राख्नुहोस् । जब तपाई पानीको प्रयोगले काम गर्नुहुन्छ तब घरमै बनेको यस लोशनलाई हातमा लगाउनुहोस् र हातको मसाज गर्नुहोस् । यसबाट तपाईको हात सुन्दर, मुलायम र सुन्दर बन्छ ।
हातको रुखोपनको समस्याबाट छुटकारा पाउनका निमित्त सिरकाको प्रयोग निकै प्रभावकारी हुनसक्छ । हातमा सिरक लगाउँदा आफ्नो हातलाई मनतातो पानीमा थोरै समयको लागि डुबाएर राख्नुहोस् र यसपछि कुनै सफ्ट ब्रशको सहायताले हल्का-हल्का रगड्नुहोस् । यसपछि आफ्नो हातलाई राम्रो सँग सफा गर्नुहोस् । यसलाई सफ्ट कपडाले पोछ्नुहोस् र यसपछि क्रीम लगाउनुहोस् ।
शरीरको रूखोपनलाई हटाउनका लागि दिनभरमा आठ देखि दस गिलास पानी पिउनुहोस् । यसबाट तपाईको त्वचालाई नरमपन प्राप्त हुन्छ । जसको कारण तपाईको हात फाट्ने समस्या कम हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक २१, २०७४ समय: ०:२७:५५